Bendzhamin Lakomb - by engavamile imifanekiso ngakuthathu, egxilile ezweni inganekwane
Iphepha amabhuku ngokuvamile ukubikezela ukufa, kodwa ngeke bafe, kodwa evela kuphela umfundi ngendlela ethé ukuhluka kancane - a ngakuthathu, okujabulisayo nesithakazelo kule uhlobo imisebenzi. Inhlanganisela ubuhlakani luvo lwembhali ezehlukile amakhono lochaza, kukwenza bayakhohlwa konke, okuholela ecstasy yobuhle. Ngamunye kushintsha yobuciko ezifana ejabulisa ivolumu izimangaliso inganekwane kuza ekuphileni.
Master "amnyama" imidwebo
Bendzhamin Lakomb, umsebenzi embukisweni zemibukiso eziningi emhlabeni kabani umbukwane, kulingisa ukusebenza encane ezigcawugcawu. imifanekiso Imininingwane usenze izinhlamvu edume kakhulu nezingane injabulo hhayi kuphela kodwa futhi abazali babo. Umbhali imisebenzi ezingaqondakali kamnandi uma uqhathaniswa umqondisi T. Burton, kodwa uyakholelwa ukuthi banayo isitayela ezahlukene ngokuphelele. abaculi ababili abanamakhono enifana, "omnyama", kodwa colorful kakhulu imihlaba.
EngumFulentshi Handsome, owaba adume, yazalwa ngo-1982. Akufundayo izisekelo yomsebenzi wabo esizayo e Paris, kodwa waqala amaphrojekthi creative. Eminyakeni 19, lo abanamakhono zokuhlobisa umfundi art esikoleni ishicilela incwadi yamahlaya, futhi kamuva wabhala mqondo - inganekwane onesihloko esithi "Cherry no-Olive", okuyinto kwakha umfanekiso ezimibalabala. Ngo-2007, umsebenzi wakhe uhamba eMelika awe 10 engcono amabhuku phezulu zezingane zase-United States.
Umbhali, umsebenzi wabo egxilile ezweni magic
lochaza French Bendzhamin Lakomb, ngiphuphe magic adalwe T. Burton Disney, ukholelwa ukuthi izincwadi izingane ukwenza kangcono kunabantu abadala. Yena yashintsha ncwadi umfanekiso kanye nokudalwa kwemisebenzi ezintathu-ntathu of ephakeme ukuze ifomu art, ngoba into esemqoka kuzo - uhla ezibukwayo. Uvula incwadi futhi uzithola wenza ku-3D-format indaba, eyenziwe ephepheni.
Benjamin Lacombe hhayi nje i-design, futhi ngokomthetho eyinkimbinkimbi nezimo volumetric izincwadi zezingane ethunywe abamemezeli emhlabeni wonke. imifanekiso Mystical, ihlanganise iphupho zonke kwengane - uthinte magic, futhi umfundi kancane othanda izithombe colorful, ezweni heroes zakho ozithandayo.
Bendzhamin Lakomb: Incwadi
Kuze kube manje, ebucayi emhlabeni umculi oye baqashelwa nasetincwadzini ehola, eboniswa imisebenzi kweziyisishiyagalombili etemibhalo.
"Mma Butterfly" yanyatheliswa A3 format esikhulu. Liyincwadi phezu drawstring, iphepha esindayo, eligoqiwe njengengelosi inkositini. Kuyamangalisa ukuthi ngakolunye uhlangothi lwale umbhalo agcwele ikhasi imifanekiso ezinyathelisiwe, ngakolunye - isithombe giant wokulinganisa phezu amamitha ayisishiyagalolunye!
Encwadini "Fairy herbarium" Bendzhamin Lakomb, ayezosebenza njengabaqondisi co-umbhali, usebenzisa amashidi engavamile ezibaziweyo, lapho abafundi bheka amehlo amahle kakhulu futhi kube intombazane udabuka kakhulu. Umsebenzi, yalotshwa njengezingoma zohlobo oluthile of idayari, ekhuluma ngendawo wezitshalo isiRashiya, iwela ihlathi imilingo beyofuna elixir ukungafi. Kusukela kulo mzuzwana iqala indaba mayelana izimfihlo emhlabeni imilingo.
Ngo-2011 wakhipha umqulu emangalisayo lenani Brothers Grimm "Snow White" ngemifanekiso ngo master okunguyena kwasekuqaleni, kuchazwa indaba ephathwayo okuphakade okuhle nokubi.
Inganekwane "Ondine" Sekuyisikhathi eside bakhangwa umbhali onekhono, "Le ncwadi -. Kunikezelwa uthando ukuthi bekulokhu nami futhi akazange anginikele kwalasha lapho bengeke benze izinkanuko zineminyaka emhlabeni" Abafundi bayamangala ayevumela iphepha amashidi ngezithombe, senziwe isu elikhethekile. Akukona nje imifanekiso, futhi inkungu isisindo ukuthi kudala ekhumbulekayo 3D-imiphumela lapho nekwendlala ekhasini.
Kusukela zisencane, wavuma uthando lwakhe Poe futhi Lewis Carroll owathanda inganekwane futhi izindaba ezingaqondakali Bendzhamin Lakomb. "Ethi Alice in Wonderland" liyincwadi esithandayo, futhi ungungqondongqondo wajabula lapho Publishing ezihlongozwayo kuye ukwenza imifanekiso inoveli, okuyinto kugujwa iminyaka engu-150 kushicilelwe kuqala.
Ukufumbathisa ngobufushane umsebenzi wakhe, sneaks kuze kube umphefumulo, kanye ekhethekile Psychology izingoma. Bendzhamin Lakomb ine isitayela ngabanye, kakhulu ukukhanya liyabonakala tinged nokudabuka nemdlalo. Ayaziwa Its isithombe zamantombazane izici obucayi, emabunzini okusezingeni eliphezulu namehlo amakhulu. Magic ezandleni zakhe livele libe nencazelo entsha wonke, futhi kwembula ezijulile.
Incwadi ngakuthathu kaBenjamin Lacombe, ukusabalala ngamunye lejabulisa izimangaliso, emangalisa ukumangala imidwebo angena nomqondo okuthiwa ubuhle Gothic. Mystical, edabukile futhi ngesikhathi esifanayo imifanekiso ethakazelisayo, uzozala ugqozi, oluhambisana angajwayelekile indlela emklamweni yezincwadi okubangelwa esinokuduma injabulo kusuka abalandeli abaqotho. Babemangala ukuthi okuyinhloko "omnyama" Umdwebo isebenzisa Amakhasi esobala ngemigwalo ezimibalabala, okuyinto onikezwe kubo, badedelane omkhulu, obucayi amashidi umfanekiso.
Umculi Bendzhamin Lakomb, ukuthi imisebenzi kabani emaqoqweni yangasese kanye iminyuziyamu, iminyaka emibili wasebenza phezu kwendalo imifanekiso noveli ngu Victor Hugo "Notre Dame de Paris". Njengoba avuma ngumlobi yena, kuba iphrojekthi sakhe eside kunazo zonke.
Ngokuvamile, master imisebenzi yonke imibala ezintathu, enikeza inhlanganisela belusizi kodwa romantic - oluhlaza, omnyama abomvu. Uthi ukuzila kuphela emvumela ukuba sandise kohlaka lokusungula.
Nomaphi lapho engena khona ungungqondongqondo, ukudala amabhuku ngakuthathu yonke indawo emigqeni emide ukuze Autographs yatuswa okuyinhloko. umsebenzi engumFulentshi ukusayina lombhali, okwenza a keepsake futhi umdwebo elincane abalandeli bakhe.
Kiat Ngo XIX B.
Ngenxa umculi osemusha Ziminu Alekseyu uphathe ezibizayo ukuthengisa umsebenzi wabo
UJan Steen: "Yekani Maduze nje, nonke - kahle"
Belarusian State Museum of ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe: incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Izidakamizwa "Siofor". Yokusetshenziswa, Izimo
Art Centre e Perino lifaka: ikheli. Showrooms Petersburg
Amasu Projective kwengqondo: umehluko omkhulu kusuka okwakha. ngezigaba
Izindlela ezimbalwa ukubeka imali ku-Webmoney
Aichryson (umuthi uthando) - omunye amaSucculents bhá
Two-ingxenye ingcina (epoxy, polyurethane)
Montenegro Lase-Ostrog - yezindawo Ibhayisikobho zemahlaya ohlonishwayo kakhulu
I kamuva uqala ukufunda olunye ulimi, the enempilo kuyinto ubuchopho bakho